09 Sep, 2021 - 06:09 2021-09-09T06:53:27+00:00 2021-09-09T06:37:06+00:00 0 Views
NDIRI mukadzi ane makore 42 nevana vatatu uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume anoda zvekuchengetana neni ari muGweru kana Kwekwe. Anoda ngaandibate pa0787 170 544.
Makadii veTishamwaridzane? Ndaneta kunyorera shambadzo yangu isiri kum­bobudawo. Ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa, ndinodawo murume ave kuda zvekuvaka musha asi matsotsi kwete. Ndine mwana mumwe chete uye ndiri pamushonga. Asingaratidzike kuti ari pamushonga andifarira ngandibate panhare idzi 0715 314 055.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndiri HIV positive uye ndodawo murume ari positive anoda wanano. Nhare yangu 0771 325 024.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvak­awo musikana wekuroora anoda zveimba kwete kutamba. Ngaave nemakore 20 zvichidzika kus­vika 18. Anondibata pa0714 626 655 ari mugari wemuKwekwe, Kadoma, Gweru neGokwe. Ndatenda.
Ndiri mukomana ane makore 30, ndotsvaka musikana wekuroora ari pachokwadi anoda zvekunamata uye ari HIV negative. Ndoda asina mwana ane makore 21 – 30. Zvakawanda totaura pa0719 830 864.
Makadii? Ndiri kutsvagawo mudzimai ari HIV+ uye ane makore 35 zvichidzika. Handina mwana, nhare yangu 0775 316 821.
Ndiri murume ane makore 48, ndinoda musikana kana mukadzi ane mwana mumwe chete uye asina chirwere. Ngaave munamati, ndokumbirawo kuti mundishambadzewo nekuti ndave nenguva handisi kuburitswawo. Ndinoshanda uye ndobatika pa0712 850 517.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 44, ndi­notsvagawo murume ane makore 50 zvichik­wira. Akarongeka ngaandibate pa0776 991 358.
Makadiiko veKwayedza? Makaita basa, nda­kazomuwana wandaida saka vachiri kufona pa0715 212 944 chiregerai.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 28 nevana 2. Handina chirwere, ndoda murume ari pachokwadi asina chirwere. Nhare yangu 0783 813 835.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 42, ndotsvakawo mukadzi ane makore kutanga pa20 kusvika 41. Ndine vana vatatu, andida ngaandibate pa0782 415 621.
Makadii varidzi vechirongwa? Ndiri madzimai ane vana 3, ndotsvaga murume anoda zveimba. Asi matsotsi nevarume vakaroora kwete. Ndine makore 32 uye ndoda munhu ane makore 35 zvichikwira anoshanda. Anoda ngaandibate pa0714 370 659.
Ndinotsvagawo mudzimai ari pachokwadi akanaka, anoda kuroora uye ari mutsvuku. Nhare yangu 0788 950 288.
Ndiri murume ane makore makumi mana, ndi­notsvaga mukadzi ane mwana mumwe kusvika pavaviri anoda kuroorwa. Ndine mwana wangu musikana ari kuita Fomu 1. Ndinoshanda kuKad­oma, kumusha kuGokwe. Ndakasununguka kunovhenekwa HIV, nhare yangu 0719 891 246.
Ndiri musikana ane makore 27, ndoda murume ane makore 27 kusvika 37. Ndine dhi­girii uye ndinoda murume anoshanda. Andifarira ngandibate pa0776 842 606.
Makadii? Ndine makore 49 uye ndodawo mudzimai ari HIV negative. Nhare yangu 0733 010 299.
Ndiri mukadzi ane makore 48, ndodawo murume ane makore 55 zvichikwira. Zvaka­wanda tozotaura asi ngaave asina mukadzi. Nhare yangu 0778 053 828.
Makadii? Ndiri murume ane makore 38 nevana 3, ndiri HIV positive. Ndogara kuMvuma uye ndi­noshanda. Ndoda mukadzi ane vana vake ane makore 24 – 36. Nhare yangu 0775 126 879.
Ndiri murume ane makore 38, HIV positive uye ndotsvaga mukadzi ane makore 35 zvichidzika. Ndiri muHarare. Nhare yangu 0773 073 743.
Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinotsvaga murume wekushamwaridzana naye ane makore 36 – 40. Anoda ngaandibate pa0771 751 434.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33 nevana 2. Ndotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 22-30 anoda zvemba. Ndogara kumusha, ndoda vemaRusape, Headlands neMacheke. Andifarira ndibate pa0714 845 123.
Ndiri mukomana ane makore 36 ekuberekwa, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 24 – 26. Ngaave asina chirwere, ndinoita basa remaoko. Kana pane andida nhamba dzangu idzo 0714 814 797. Handidi kubhipwa, bodo ndaramba.
Ndiri murume ane makore 31, ndogara kuE­pworth uye kumusha ndekwaZvimba. Ndi­notsvagawo mukadzi, andifarira ngaandibate pa0780 689 492.
Ndiri mudzimai ane makore 42 nemwana mumwe chete, ndinoda murume ane makore 45 – 60. Ndiri HIV positive, ave kuda zvemusha ngaandibate pa0775 074 941.
Makadini hama neshamwari? Ndiri murume ane makore 30 uye ndinotsvagwo mukadzi ane makore 18 – 27. Ari pachokwadi ngaandibate pa+27 641 629 927, ndinogara kuSA.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nevana 2, ndotsvagawo mukadzi akanaka ane makore 18-35. Ngaave ane mari yake asi kwete yekuromba. Ndinoshanda, andi­farira ngaandibate pa0777 874 583 asi vakadzi vevanhu kwete.
Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye anove mukobvu ane rudo uye asina chirwere. Ane chero api makore, andifarira ndibate pa0773 278 946.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana wemakore 29, ndinotsvaga musikana wema­kore 18 kusvika 24 wekuroorana naye. Andifarira ndibate pa0774 432 150.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa, HIV positive uye ndodawo murume ane makore 46 zvichienda mberi. Ndogara kumusha, 0717 433 599 ndon­hamba dzefoni.
Makadii? Ndiri mukomana ari pakutsvaka musikana wekuroora. Andifarira anondibata pa+27 617 583 030.
Tishamwaridzane, vaifona pa0776 369 094 ngavachirega havo.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38, ndan­zwa nemacheat lovers. Ndotsvakawo murume ane makore 40 zvichikwira ari HIV negative. Nhare yangu 0782 541 955.
Ndiri murume anotsvagawo wekuroora ane makore 25 kusvika 35. Nhare yangu 0714 990 457.
Makadii? Ndiri kudawo mukadzi wokuroora ane makore 30 zvichidzika. Ndine makore 44 uye ndiri pamushonga.
Makadii vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 26, ndodawo murume wekugara naye. Ndine mwana mumwe chete, matsotsi kwete. Nhare yangu 0714 840 977.
Makadii pano? Ndinotsvakawo mudzimai wokuroora ane makore 33 zvichidzika. Ndine makore 43 nemwana mumwe uye ndiri pamush­onga. Nhare yangu 0715 579 977.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42 ekuberekwa uye ndinotsvaga mudzi­mai wekuroora akavimbika. Ngaave anoda zve­musha anobva kuBuhera, Hwedza, Njanja kana Chivhu ane makore 30 zvichidzika
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 37, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora uye ari pachokwadi. Ndine vana vaviri, iye ngaave ane vakewo. Ndinoda ari pakati pemakore 38 – 50. Andifarira ndobatika pa0713 575 471, zvakawanda tozotaura.
Makadii veTishamwaridzane? Ndokumbirawo vanhu vachirega kufona pa0718325123, zvangu zvakaita. Ndatenda hangu.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37 nem­wana 1, handisi pamushonga uye ndodawo mudzimai ane makore 23 kusvika 37 ane mwana kana asina. Ave kuda zvemba ndoba­tika pa0716 180 511.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndi­notsvagawo mukadzi ane makore 35 zvichidzika ari positive. Nhamba yangu 0777 916 025, ndiri muHarare.
Makadiiko? Ini ndiri murume ane makore 44 nevana 3 uye ndiri HIV+. Ndinotsvaga mukadzi wekugara naye akafirwa nekuti inini ndaka­firwa. Ndine makore 30 – 44. Handishande, ndinogara kumusha. Ngaave anobva pedyo neChivhu, anotya Mwari uye ane rudo. Mondi­bata pa0718 918 303.
Kwayedza makadii? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 20 kusvika 25 asina chirwere. Ndobatika pa0779 171 199.
Makadiiko? Ndiri mukadzi ane vana vatatu, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ave kuda zvemba asi varume vevanhu kwete. Zvizhinji totaura, kana pane anenge andifarira anofona pa0777 948 845.
Makasimba here? Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa uye ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 25 ave kuda zvekuroorwa. Akavimbika ngaandibate pa0786 660 024.
Ndiri murume anodawo mukadzi wekuro­ora ari pamushonga, akasimba ane muviri muhombe. Ndiri muHarare, ndibatei pa0774 894 069.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzi­mai ane makore 23 nevana vaviri. Ndinots­vakawo murume wekushamwaridzana naye, ngaave nemakore 25 kusvika 33. Anondibata pa0777 540 657.
Ndiri musikana ane makore 25 handisi pamushonga uye ndiri kutsvaka mukomana ane makore 25 – 40. Nhamba dzangu 0771 869 794.
Ndiri mukadzi ane makore 26, ndinotsvagawo shamwarirume yekushamwaridzana nayo isiri pamushonga. Ari pachokwadi andifarirawo ngaandibate pa0780 729 141.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri kuts­vagawo murume wekuwanana naye. Ndine makore 44, nhare yangu 0786 713 582.
Ndanyorera kakawanda, matsotsi kwete. Ndiri murume ane makore 44, HIV+ uye ndinotsvaga mudzimai wekugara naye ane 35 – 44 akafirwa. Vakarambwa imbomirai, ndinorarama nekurima kumusha. Ndinoda vari mudhuze neChivhu,
MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwarid­zane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.
YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE:
Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongwa chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharembozha dzavo chaidzo. Hachipo kupa­radza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikwa nevakaroora havakurudzirwe kunyorera kuchirongwa ichi. — MUPEPETI.